ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့်ကာ သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြု.... - Myitter
August 29, 2019 Myitter နိုင်ငံတကာသတင်း 0
ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့်၊ သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြု….
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျနေသော မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းတရားရုံးက အမိန့်ချရာ အယူခံရူံးနှိမ့်ပြီး သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်…..
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နွန်ထဘုရီခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားသူကြီးက မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်သော ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် ဇော်လင်းတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တရားရုံးရှေ့ရောက်ရှိနေသည့် လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသော မြန်မာသံရုံးအထူးအဖွဲ့မှဦးထူးချစ်က ပြောသည်…..
တရားသူကြီးက ထိုင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀နာရီမှစ၍ အမှု့ကို စတင်ဖတ်ကြားပြီး နေ့လည် ၁ နာရီထိ အချိန် ၄ နာရီကြာ ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း ဦးထူးချစ်က ပြောသည်။
ဝငျးနှငျ့ ဇျော နောကျဆုံးအယူခံရူံးနိမျ့၊ သဒေဏျကို ဆကျလကျအတညျပွု….
လိပျကြှနျးလူသတျမှုဖွငျ့ သဒေဏျကနြသေော မွနျမာလုပျသားနှဈဦး၏ နောကျဆုံးအယူခံကို ထိုငျးတရားရုံးက အမိနျ့ခရြာ အယူခံရူံးနှိမျ့ပွီး သဒေဏျကို ဆကျလကျအတညျပွုလိုကျပွီဖွဈသညျ…..
ဘနျကောကျမွို့ရှိ နှနျထဘုရီခရိုငျတရားရုံးတှငျ တရားသူကွီးက မွနျမာလုပျသားနှဈဦးဖွဈသော ဝငျးဇျောထှနျးနှငျ့ ဇျောလငျးတို့၏ ရှမှေ့ောကျတှငျ ဖတျကွားခွငျး ဖွဈကွောငျး အဆိုပါ တရားရုံးရှရေ့ောကျရှိနသေညျ့ လိပျကြှနျးလူသတျမှုအရေးဆောငျရှကျပေးနသေော မွနျမာသံရုံးအထူးအဖှဲ့မှဦးထူးခဈြက ပွောသညျ…..
တရားသူကွီးက ထိုငျးစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁ဝနာရီမှစ၍ အမှု့ကို စတငျဖတျကွားပွီး နလေ့ညျ ၁ နာရီထိ အခြိနျ ၄ နာရီကွာ ဖတျကွားခဲ့ကွောငျး ဦးထူးခဈြက ပွောသညျ။